Kedu otu m ga esi edozi njehie OneNote? - Njehie
Isi > Njehie > Onenote error 0x803d0013 - kedu ka ị si ekpebi
Onenote error 0x803d0013 - kedu ka ị si ekpebi
Kedu otu m ga esi edozi njehie OneNote?
NaOneNote, pịa Njikwa> Ama. Pịa Lee mmekọrịta Ọnọdụ bọtịnụ. Tulee makanjehiena igbe okwu, mara ihenjehiekoodu na ozi ma lelee ndepụta nkenjehieKoodu n'isiokwu a. Mara: may nwere ike ịhụ bọtịnụ Enyemaka Nweta n'akụkụ otunjehie.
Pịa na (Kagbuo kefriza akaụntụ gị) Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa ma ọ bụ chere 24 awa tupu ịbanye n'ime onedrive.
Kedu ihe kpatara microsoft OneNote m anaghị arụ ọrụ?
Ọ bụrụ naOneNotedesktọọpụ software bụanaghị arụ ọrụ, you pụrụ ibu ụzọ kpochapụOneNoteechekwa ma lee ma ọ n’enye aka. ... Ọ bụrụ naOneNoteWindows Store ngwa bụanaghị arụ ọrụna Windows 10 PC gị, ịnwere ike imeghe Ntọala> Ngwa> Ngwa & atụmatụ>OneNote> Nhọrọ di elu ma pịa Tọgharia iji tọgharịa ngwa Ahịa Windows.Jul 4 2019
Ana m eji OneNote afọ ole na ole ugbu a. Isi ihe kpatara ya bụ ka a hazie ya nke ọma. See hụla, m na-eche echiche gbasara ọrụ m ga-arụ.
Enwere m echiche maka isiokwu ọhụrụ, achọrọ m idetu aha ngwa ọhụrụ nke mmadụ gwara m maka ya. Achịkọta m ndị a n’ebe dị iche iche ma onweghị onye n’ime ha mekọrịta. Ọtụtụ n’ime ha efuola n’ime oghere ojii.
N’isiokwu a aga m esoro gị ụfọdụ ndụmọdụ na usoro OneNote yana otu m chọrọ iji ya. (Upbeat music) Tupu anyị ebido, ekele dịrị Skillshare maka ịkwado edemede nke taa. Skillshare bụ usoro mmụta nke nwere ọtụtụ agụmakwụkwọ dị ukwuu.
Na m nwere a pụrụ iche njikọ gị nke na-enye gị ọnwa abụọ nke free adịchaghị ohere. Nwere ike ịchọta ya na nkọwa nke isiokwu a. Mana m ga-akparita ụka banyere ya na njedebe ka nọrọ na-ege ntị.
Ugbu a, ka ibuga na ndụmọdụ anyị. David Allen, onye edemede nke Inweta Ihe Eme. Ọ bụ nnukwu akwụkwọ, n'agbanyeghị, ana m akwado ya nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ya.
O kwuru na ị nwere echiche ma ị naghị arapara n'ahụ ha. Ya mere, anyị kwesịrị ịchọta ụzọ iji dekọọ ma chekwaa echiche imewe na mpụga ka anyị wee nwee ike ilekwasị anya na ịme ihe ndị ahụ n'ezie. N’ebe a ka OneNote batara m.
OneNote bụ akwụkwọ ndetu dijitalụ, mana ọ karịrị ọtụtụ na nke ahụ. Ama m na ị ga-ekwenye m na njedebe nke edemede a. Ka anyị gaa Atụmatụ arụpụtaghị nke OneNote m.
Number otu, Jiri hierarchies iji hazie onwe gị. Akụkụ dị ukwuu na OneNote bụ na ị nwere ike ịmepụta usoro nhazi gị. Enwere isi ọkwa atọ, ọkwa kachasị elu bụ akwụkwọ ndetu, dịka akwụkwọ ederede anụ ahụ, ha nwere ike ịnwe ọtụtụ peeji bụ ngalaba.
Chee echiche banyere ya dị ka isi akwụkwọ. Na n'ikpeazụ enwere akụkụ. Ndị a nwere ederede gị.
Ka anyị kwuo na anyị mepụtara akwụkwọ ndetu gị niile. Anyị nwere ike pịa aka nri ma họrọ Akwụkwọ Ndetu Ọhụrụ ma ọ bụ pịa. pịa tinye akwụkwọ ndetu n'okpuru.
Akụkụ ndị dị na akwụkwọ ndetu a nwere ike ịdị iche iche ka anyị wee nwee ike ịmepụta ngalaba maka ndị mbido, otu maka usoro ọmụmụ, otu maka nri anaghị eri anụ, otu maka desserts, were gabazie. I nwere echiche. N'ime ngalaba anyị na-agbakwunye peeji dị iche iche maka uzommeputa n'ezie.
Lee, anyị nwere uzommeputa maka anụ osikapa ero burger. Anyị nwere ihe ndị mejupụtara ya, ntuziaka anyị nwere ike itinye foto yana ọbụnakwa jikọta ebe anyị si nweta nri ahụ. Ewezuga usoro nri ndị a, a na m enwekarị akwụkwọ ndetu maka echiche maka isiokwu nwere ngalaba dị iche iche dabere n’ọganihu gị, dịka ịtụgharị uche, nyocha, ma ọ bụ ịde ederede.
Enwekwara m akwụkwọ ndetu maka ihe onwe onye dịka ndepụta ịzụ ahịa, ezumike, wdg. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọkwa ndị ọzọ, ị nwere ike ikpokọta ọtụtụ ngalaba n'ime ngalaba ngalaba, ịnwere ike ịdọrọ ngalaba n'ime otu. Ọzọ oyi akwa ị nwere ike ịmepụta bụ subpages.
Iji jiri ha mee ihe ị kwesịrị ịnwe ma ọ dịkarịa ala peeji abụọ na ngalaba e nyere. Ya mere, ka anyị kwuo ebe a enwere m peeji nke m nwere nzukọ nzukọ m na nzukọ Excel, enwere m ike ịmepụta obere ihe Afọ na ndetu maka ngalaba nke ọ bụla, yabụ enwere m mpempe akwụkwọ akpọrọ Oge Oge Excel Conference Bulgaria na obere peeji maka nzukọ ọ bụla. Pịa ka ịmepụta peeji nke obere Gaa na peeji nke ịchọrọ ịtụgharị na ibe obere ma họrọ Mee Subpage Mee.
Ọ ga-abanye aha ya. I nwedịrị ike ịnwe akwa dị iche maka ibe akwụkwọ na-ekwu Ala nke Subpage. Anaghị m eji nke a oge niile, mana ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndetu ma chọọ usoro zuru ezu, ha nwere ike inye aka.
Na nchịkọta, ndị a bụ ọkwa ọkwa dị iche iche ị nwere ike ịnwe. Akwụkwọ ndetu, ngalaba otu, ngalaba, ibe, ala otu, ala abụọ. Naanị ịmalite na nhazi nke nwere nghọta nye gị, ịnwere ike ịgbanwe ya ma ọ bụ tinye ya ma emesịa.
Nọmba abụọ, jiri mkpado iji chọta ihe ị chọrọ. Mkpado bụ ụzọ dị mma iji kesaa ma tinye otu ndetu na-anọghị n'otu akwụkwọ ndetu ma ọ bụ ngalaba na ederede ederede akwụkwọ m, na nke a maka Power Query, ebe m nwere ndetu maka ịmụ M-isi. Ka anyị kwuo na nke a bụ ihe m chọrọ ịtụle ime n'oge a.
Site na iji akara ngosi Ndetu nke edeturu n’elu, enwere m ike ịhọrọ akara ngosi dị iche iche iji gbakwunye na ndetu ma ọ bụ akụkụ nke ndetu ahụ. Yabụ enwere m ike iji nke a cheta nke a maka emechaa, echefula ya. Na akwụkwọ ndetu ọzọ maka nyocha m enwere m peeji iji lelee ngwa a maka onye na-agụ barcode.
Enwere m ike ịkpado ihe edetu a na otu mkpado ahụ, echetara gị otu ụbọchị mgbe e mesịrị, yabụ na agbanyeghị na ha nọ n'ọkwa dị iche, a ka na-achịkọta ha na ọ dị mfe ịchọta ihe mkpado gị ma emechaa.
Ka anyị kwuo na ịchọrọ ịtụle ederede niile edere maka nchekwa maka oge ọzọ, ihe niile ị ga - eme bụ pịa akara ngosi ọchụchọ na aka ekpe ebe a, ma ọ bụ naanị pịa ebe nyocha ahụ ma họrọ site na mkpado ndị a na-atụ aro n'okpuru. Ma ọ bụ na pịnye ihe ị na-achọ ma họrọ ụbọchị ịchọrọ. Ga-enweta ndepụta nke ndetu niile nke nwere mkpado a.
Can nwere ike ma jiri akara ngosi mara mma, mana ana m akwado ịmepụta usoro mkpado gị site na mkpado omenala gị. Ihe ị ga - eme bụ pịa Mepụta Mkpado Ọhụrụ na ala ebe a ma ị nwere ike ịkpọ ya ma họrọ akara ngosi maka ya Tags dịka ị nwere ike na ụdị nke OneNote gara aga. A na-agbakwunye ndị ọhụrụ n'okpuru ebe a, ya mere, agala n'elu ma debe ọnụọgụ nke akara ngosi aha njirimara.
Ya mere, jiri mkpado na categorize ndetu. Enwere ọtụtụ ojiji maka mkpado, jiri ha dịka mkpa gị. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ ịdekọ ọrụ ị kenyere ndị otu gị ma ọ bụ jiri ha gosi akụkụ dị mkpa na ndetu ọmụmụ gị.
Ha na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ihe ịchọrọ, mgbe ịchọrọ ya. Number atọ, jot echiche ala na nke nnyapade ndetu n'ebe niile. Mgbe ọ bụla m na-apụ apụ, aga m ede ihe m achọghị ichefu na mpempe akwụkwọ, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ha efuola ma ọ bụ na m tinyere oge dị ukwuu na-achọ azụ m, ọ dịghị ihe ọzọ.
Achọtara m Akwụkwọ ndetu. Ejiri Sticky Not si ngwa OneNote dị na ekwentị. Yabụ ọ bụrụ na achọrọ m ide ihe ngwa ngwa, naanị m mepee ngwa OneNote wee pịa bọtịnụ ahụ, Ndenye akwụkwọ n'okpuru, wee bido ide.
Enwekwara m ike ịchọta ihe niile edeturu akwụkwọ ndị edeturu m ebe a, yabụ mgbe m laghachiri n'ọfịs ma chọọ ịhụ ndetu ndị a, aga m aga ngwa ngwa Sticky Notes. Ọ bụ ngwa arụnyere n’ime Windows 10. I rute ebe ahụ, pịa bọtịnụ mmalite wee pịpịa nke nnyapade ị ga-ahụ etu esi egosi ebe a.
You ga-ahụta ya dị ka ngwa dị iche na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ gị, ebe ọ bụ akụkụ nke ngwa OneNote na ekwentị mkpanaaka gị ma mekọrịta ya na akpaghị aka ka ị nwee ihe ndetu gị mgbe niile, n'agbanyeghị ebe ị bugara ha. Number ano, wepu ederede site na onyonyo. Akụkụ ọzọ dị mma bụ Optical Character Recognition, ma ọ bụ OCR, ihe onyonyo a. Nke a nwere nnukwu uru abụọ, nọmba nke mbụ, ịnwere ike i canomi ederede site na onyonyo ka ịghara iji aka dee ya.
Dịka ọmụmaatụ, edere m ihuenyo ahụ na ndetu m. Mgbe m pịrị aka nri na ya, ana m enweta nhọrọ iji detuo ederede site na onyonyo. M nwere ike imeghe a ọhụrụ na peeji nke na-anụ ederede depụtaghachiri si ndise.
Uru nke abụọ m na-ejikarị eme ihe bụ na m nwere ike ịchọ ederede na mbiet. M na-anakọtara ọtụtụ ozi site na isiokwu m na-edetu na ya, ana m eme ntanetịime ntanetị na foto. Mgbe m na-achọ ihe kpọmkwem mgbe e mesịrị, ana m eji ọrụ ọchụchọ ahụ.
Ọrụ OCR na-achọkwa ederede dị na mbiet ahụ ma gosipụta ozi niile dị mkpa, gụnyere ihe oyiyi. Nọmba nke ise, lekwasị anya n’ihe na-emikpu onwe gị. Akụkụ dị mma m chọrọ iji mgbe m chọrọ ilekwasị anya na ederede ma ọ bụ maka nyochagharị bụ Ọgụgụ Na-emikpu.
Ejikọtara ya ọnụ na ọtụtụ ngwa dị ka Okwu, Outlook na OneNote. Mgbe ị nọ na ibe, na Lee taabụ, ịpị Onye Na-agụ Ọgụgụ na-eme ka ọ dịrị nfe na ngwa ngwa ịgụ. Nwere ike ịgbanwe ntọala maka ogo ederede na isiokwu agba ka amasị gị.
Nke a bụ ebe ị nwekwara ike ịgbanwe font ahụ, ma ihe na-adọrọ mmasị bụ Comic Sans, font nke nwere ike ọ gaghị adị mma na ọnọdụ ọkachamara mana ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ụmụaka ma nwee ụdị G nke ahụ ka ụmụaka si amụta ide ihe n'ụlọ akwụkwọ. I nwekwara ike iji nke a mụọ ihe gị na ụmụ gị. I nwekwara ike iji bọtịnụ egwu dị n'okpuru wee gụọrọ gị ihe ederede.
Mụta otu esi enyocha ma ihe mgbazinye bara uru ịzụrụ site na ịgbakọ ego nkwụghachi. Ntọala olu na-enye gị ohere ịgbanwe ụda olu ma họrọ olu nwanyị ma ọ bụ nke nwoke. Anyị na-edozi ndebiri Excel.
Onwe m, m na-eji OneNote. Mana enwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ nwere ike inye aka dabere na mkpa gị. Iji maa atụ, ịnwere ike iji aka wee see ụdị wee jiri ink dee ụdị ahụ, OneNote ga-agbanwe ya ozugbo na ụdị nwere ahịrị kwụ ọtọ yana akuku dị ọcha nwekwara ike ịgbanwe ederede gị ka ọ bụrụ ederede ederede, enwere m obi abụọ n'ihi na enwere m aka ederede dị egwu. ọ na-ejikwa tụgharịa nke m, buru ụzọ jiri nhọrọ lasso họrọ ihe ịchọrọ ịgbanwe, wee pịa pịa Ink na Text ebe a, anaghị m eji atụmatụ a oge niile n'ihi na m pịnyere ngwa ngwa, mana ọ nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ jiri aka gi dee ihe edeturu gi.
Nwere ike iji OneNote maka nsogbu mgbakọ na mwepụ. Nwere ike ide ederede, jiri nhọrọ lasso họrọ ya, pịa Math. Ink na Math n'elu nwere ike ịgbanwe ya na ederede ederede.
Mana nke ahụ abụghị ihe niile, ị nwere ike ịjụ, pịa otu nhọrọ ma dozie akụkụ ahụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwedịrị ike igosi stepson otu esi edozi ya. Mara mma mma? Agwala ndị nkụzi gị.
Enwere ụdị dị iche iche nke OneNote dị ka Otu ma ọ bụ 2013 ma ọ bụ OneNote 2016. Mana ụdị ọrụ a na-akpọzi naanị OneNote. Ọ dị na Windows. yana kwa maka Mac Plus, ọ bụ n'efu ma ọ na-emekọrịta n'ofe ngwaọrụ gị niile, yabụ ị hụrụ, enwere m ụzọ niile ị nwere ike iji OneNote iji hazie ma rụpụta ihe.
Ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ kachasị amasị gị, kekọrịta ha n'etiti anyị n'okpuru, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọhụụ ọ bụla ị ga-eso OneNote nke m kpuchitere n'isiokwu a, kekọrịta ya n'okpuru. Ọ bụrụ n'ịdị ka m ma chọọ ịmatakwu obere oge, ana m akwado ịmị ihe ọmụmụ na Skillshare. Skillshare na-enye ọtụtụ puku nkuzi na isiokwu dị egwu, gụnyere nrụpụta ọrụ, freelancing, nka teknụzụ dịka nka ụlọ ọrụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Otu n'ime nkuzi ikpeazụ m gara na Skillshare bụ Nrụpụta Dị Mfe, Otu esi eme ihe na obere. Usoro a mere ka m chee echiche ugboro abụọ banyere ndepụta m na-eme kwa ụbọchị. Aghọtara m na ọ bụghị banyere oge m rụzuru na oge ụfọdụ, kama banyere ikpebi ihe dị mkpa, nke ahụ adịghịkwa mfe, n'ihi na ihe niile dị mkpa na mbu.
Enwere m ekele maka ngwaọrụ ndị ahụ, nke e kere òkè na usoro a iji nyere m aka. Y’oburu n’inwe mmasi iwere akwukwo a ma obu otutu puku klas c na Skillshare, pinye aka na ihe nkowa n’ime igbe nkọwa a ka ị nweta otu onwa abuo n’efu n’enye gi ohere. Mgbe ọnwa abụọ gachara, ndebanye aha kwa afọ na-erughi $ 10 kwa ọnwa, nke na-eme ịmụ nkà ọhụụ dị oke ọnụ iji lelee, enwere m olileanya na edemede a nyere gị ụfọdụ echiche iji otu OneNote nwere ike iji meziwanye usoro gị kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, nye ya mkpịsị aka aka - ịchọrọ ịmụ nka ọhụrụ. Aga m ahụ gị n'isiokwu na-esonụ. (egwu na-ada ụda)
ihe bụ wmpnetworksvc
Kedu otu m ga esi edozi OneNote site na mkpọka?
Tupu iwepuOneNote, ị nwere ike ịnwalendoziya site na isoro usoro ndị a:
Họrọ bọtịnụ Malite, wee họrọ Ntọala> Ngwa> Ngwa & atụmatụ.
HọrọOneNote> Nhọrọ di elu.
Gbalịa kwụsị, Mmezi na Tọgharia na n'aka.
Kedu ka m ga esi tọgharịa OneNote na ntọala ndabara?
Swipe gaa na ndepụta ndepụta nke ngwa arụnyere wee pịaOneNoteakara ngosi NaNhọrọ OneNote, n'okpuruTọgharian'isi, pịaTọgharia OneNote. NaTọgharia nhọrọ OneNote, pịa iji gbanye nhọrọ Hichapụ Akwụkwọ ndetu niile, wee pịa iji gbanye nhọrọ Nhichapụ Nbanye Asambodo.
Etu esi gbanwee usoro ndabara nke akwụkwọ ọhụrụ na Microsoft Okwu iji kwekọọ na font na nhazi paragraf. Ndewo, A bụ m Dawn Bjork, sọftụwia Pro. Abụkwa m onye na-azụ Microsoft asambodo na onye amaara Okwu Okwu.
N'ime ọzụzụ a, anyị ga-elekwasị anya n'otú ị ga-esi rụọ ọrụ na akwụkwọ ọhụụ ọhụụ na Microsoft Word. Iji mepụta akwụkwọ ọhụụ ọhụụ anyị nwere ike ime nke a site na Njikwa> Ọhụrụ ma họrọ Akwụkwọ Akwụkwọ. Ma ọ bụ, ọ dabara adaba, ụzọ mkpirisi keyboard CTRL + N.Word wee nye gị akwụkwọ ọhụụ ọhụụ dabere na ihe a maara dị ka template nkịtị, nke ndị a bụ ntọala ndabere gị.
Otú ọ dị, nke a nwere ike ọ gaghị abụ kpọmkwem ihe ị chọrọ ka ọ bụrụ. Ka anyị leba anya na ntọala ndabara dịịrị gị na Okwu yana ị nwekwara ike ịhazi. Iji mee ka nke a dị ntakịrị mfe ịhụ na m ga-ekepụta ederede ederede ka nke a bụrụ obere ego maka gị.
Oge obula ichoro ime ihe omuma nke Okwu gi ma o nweghi ike igbanye otutu ederede mee nke a. All m ga-eme bụ pịnye = RANDas na random emeghe brackets, 10 commas 5. Ugbu a, i nwere ike iji nọmba gị onwe gị nwere ike ịdị iche.
Nọmba mbu bu ọnụọgụ paragraf ịchọrọ nke abụọ bụ ọnụọgụ ahịrịokwu na paragraf ọ bụla. Mechie ihe nkwado mechiri emechi wee pịa Tinye. Ma ugbu a, enwere m ederede aghara iji rụọ ọrụ, yana ọ bụkwa ụzọ dị mfe iji gosi ma gosipụta ụfọdụ ntọala ntọala ọkọlọtọ ahụ.
Ntọala ndabara mbụ anyị nwere na Microsoft Okwu maka akwụkwọ ọhụụ ọhụụ bụ na anyị nwere akụkụ nke anụ ọhịa inch gburugburu, na nha peeji anyị na nghazi anyị bụ Akwụkwọ Ozi Akwụkwọ na Eserese. Ndị a bụ ntọala na-emetụta na United States; Ndabara ntọala gị nwere ike ịdị iche. Iji gosi nke a, ahọpụtara mpụta okirikiri nhọrọ ukwuu ebe a ka m na-ahụ akụkụ n'akụkụ otu inch.
Ugbu a ekwesighi m ịgbanwe nke a. N'okwu a, enwere m obi ụtọ na ya. Mana n'ezie enwere ike gbanwee ndị a na ntọala akwụkwọ yana yabụ anyị nwere naanị ihe anyị nwere mgbe anyị nwere akwụkwọ ọhụụ ọhụụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, nkwụsị usoro anyị abụghị otu ahịrị. Ka anyị lelee ntọala ndabara na Microsoft Okwu. Site na Nhazi okpokoro, nke a bụ otu n'ime ụzọ isi bịa ebe a.
M na-aga na paragraf otu wee pịa dialog launcher ahụ. Nke ahụ bụ obere akụ na akuku. Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ebe a na anyị nwere oghere mgbe ihe 8 gasịrị.
Nke a pụtara na mgbe anyị pịa Tinye na njedebe nke paragraf, ọ bụghị naanị ịgbada ahịrị. Ọ na-agbakwunye ihe nchekwa ma ọ bụ ohere mgbe 8 gasịrị, nke bụ ihe na-erughị otu ohere. Nhapu usoro anyi abughi otu.
Ọ bụ 1.08. Ugbu a, ewuola ha niile iji mepụta ederede nke enwere ike ịlele dị ka nke ederede ma ọ bụ karịa anya.
Agbanyeghị, nke a nwere ike ọ gaghị ezute ụkpụrụ ị na-ejibu site na akwụkwọ ndị ị na-arụ ọrụ na Microsoft Word. Maka ugbu a, m ga-akagbu nke a. Anyị nwere ndabara ọzọ na ị nwere ike ịgbanwe kwa.
Aga m na taabụ ''lọ' ka ị wee hụ nke a, nke bụ na akara ngosi anyị bụ Calibri 11. Ọ bụrụ na nzukọ gị na-eji Times New Roman ma ọ bụ Arial na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ịchọrọ ka ọ bụrụ 12point, a ga-agbanwe ihe ndị a niile n'otu akwụkwọ ma ọ bụ maka akwụkwọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ Nke ahụ bụ obere ndụmọdụ: ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ya naanị ụfọdụ paragraf maka akwụkwọ a, enwere m ike ịhọrọ nke a na taabụ Homelọ n'okpuru Styles. Enwere nhọrọ ebe a na-akpọ Enweghị Ọgba.
Yabụ na m nwere ike ịgbanwe paragraf ahọpụtara ka ha wee ghara inwe nke ọ bụla n'ime ha. Ma n'ezie, ọ nwere ike iwe iwe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta leta, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ pịnye aha ma ọ bụ adreesị na Aha pịa Tinye ma ugbu a ọ na-awụlikwa elu na ọ bụghị ụdị ịchọrọ ka ọ dị. Kedụ ka anyị nwere ike isi gbanwee ntọala ndabara ndị a? Nke mbu, bido site na akwukwo ohuru ohuru.
N'okwu ahụ, aga m ehichapụ ọdịnaya ọ bụla m nwere ebe a. Ya mere enwere m akwụkwọ ọhụụ ọhụụ. Na-esote, ka anyị lelee otu esi agbanwe usoro ederede, mgbe ahụ aga m aga na taabụ Home, gaa na igbe mkparịta ụka, anyị nwere ike iru ebe ahụ ma CTRL + D ma ọ bụ site na ịpị mkpọsa okwu ahụ ma ọ bụ obere akụ ahụ.
M ga-ahụ ihe ọ bụla font m chọrọ ka ọ bụrụ ndabara m font maka ọdịnihu akwụkwọ ọhụrụ ọhụụ. Na nke a, achọrọ m ka nke ahụ bụrụ Times New Roman, enwere m ike ịmalite ịpị ihe ahụ, lee ya na ndepụta ahụ ma achọrọ m ka ọ bụrụ isi 12. Yabụ ihe ọ bụla nhọrọ ahụ nwere ike ịbụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị maka akwụkwọ a, anyị ga-ahọrọ OK, mana nke ahụ bụ ihe m chọrọ ime site na nke a gaa n'ihu. Kama, m họrọ Tọọ dị ka ndabere maka iji hụ na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ. Okwu kpaliri gị: you chọrọ ịgbanwe ndabara font maka akwụkwọ a naanị ma ọ bụ akwụkwọ niile dabere na template Normal.dotm na Times New Roman? Nke a bụ faịlụ dị na kọmputa gị, na sistemụ gị, ma na-echekwa ntọala ndabara gị mgbe ị mepee Okwu ma anyị hụ akwụkwọ ọhụụ ọhụụ.
Yabụ m họrọ akwụkwọ niile wee họrọ OK. Nke ahụ bụ peeji ahụ. I nweghi ike igbanwe ederede ndabara.
Ikekwe ị chọrọ ịgbanwe ahịrị oghere. Ka anyị hụ otu esi eme nke ahụ. Maka ọtụtụ mmadụ, ọ na-esiri ike karị ịrụ ọrụ site na iji nkenke nkenke paragraf na iwe oge iji gbanwee ya na akwụkwọ ọ bụla.
Ka anyị hụ otu ị ga - esi gbanwee usoro paragraf ndabara na ihe na - arụ ọrụ maka gị. Ọzọkwa anyị nọ na akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ a. Kwesighi ịmepụta akwụkwọ ọzọ maka nke a.
Anyị agaghịdị echekwa faịlụ a. Ihe ị ga - eme bụ ịtọ ntọala anyị na ndebiri nkịtị gaa na igbe mkparịta ụka Paragraf ma nwee ọtụtụ ụzọ dị iche iche ị ga-esi gaa ebe ahụ. Enwere m ike ịga na ndepụta ndepụta Spacing ebe a wee họrọ Nhọrọ Nhọrọ Line, gaa na Mkparịta ụka Mkparịta ụka ma ọ bụ akụ a nke na-emepekwa igbe mkparịta ụka Paragraf maka ya.
Ihe kacha amasị m bụ na mgbe m kụrụ Tinye, achọghị m ịgbatị ohere ọ bụla, yabụ m ga-agbanwe nke ahụ na Pound Zero na achọrọ m ịgbatị usoro akara otu. Ọ bụrụ na ị nwere usoro iwu dị iche, naanị mee nhọrọ ahụ wee họrọ Tọọ dị ka ndabere dị ka ọ dị na mbụ. Kwenye ọzọ na ndị a bụ ntọala ndabara ị chọrọ maka akwụkwọ a naanị ma ọ bụ maka akwụkwọ niile dabere na template nkịtị a.
N'okwu a, aga m ahọrọ All Documents ma họrọ OK. Emekwara mgbanwe mgbanwe ndị a na akwụkwọ ọhụụ ọhụụ a, mana ka anyị hụ ihe ga-eme mgbe m mepụtara akwụkwọ ọhụụ ọhụụ. Dịka m kwuru na mbụ, anyị nwere ike ime CTRL + N maka ọhụụ.
Nke a bụ akwụkwọ ọhụụ ọhụụ. Anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ozi gbasara nhazi anyị ebe a, mana ka anyị nwaa ọzọ, = RANDopen parentheses. Enwere ike achọrọ m paragraf asatọ ma nwee ahịrị isii maka nke ọ bụla wee pịa Tinye.
Ugbu a enwere m Times New Roman 12 maka ọkwa. My akara spacing bụ otu akara na enweghị m ohere ọ bụla na njedebe nke paragraf ọ bụla. Ozugbo i mechara mgbanwe ndị a, buru n’uche na ịhazi ya ga-abụ ihe doro anya n’akwụkwọ ọ bụla.
Yabụ naanị ịchọrọ ịgbanwe akwụkwọ ọhụụ gị. Dabere na nhọrọ ndị ọrụ gị, ntụgharị dabere na ihe ị nwere ike ịgbanwe na sistemụ gị. O yikarịrị ka a ga-akpali gị ịchekwa template nkịtị mgbe ị kwụsịrị Okwu m ga-akwụsị Okwu ahụ.
Achọghị m ịchekwa akwụkwọ ndị a. Ugbu a enwere m nnọkọ Okwu ọhụụ na ntọala ndabara ọhụrụ m họọrọ. Ugbu a, ị hụla otu ị nwere ike isi chekwaa oge na mbọ site na ịgbanwe usoro ndabara maka akwụkwọ ọhụụ ọhụụ na Okwu.
Maka ndụmọdụ ndị ọzọ banyere imepụta ihe na Okwu Microsoft, gaa na TheSoftwarePro.com/Word. Ọ bụrụ na ọzụzụ a nyere aka, dị ka, kwuo, ma denye aha na isiokwu a, nke a bụ Dawn Bjork, The Software Pro.
Daalụ maka ikiri.
Kedu koodu mperi maka OneNote na Windows 10?
Njehie OneNote 0x803d0013: Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ koodu mmebi nke nwere ike ịpụta mgbe ị na-eji OneNote. Enwere ike ibute nsogbu a site na profaịlụ njirimara rụrụ arụ, ị nwere ike idozi ya site na ịmepụta profaịlụ njirimara ọhụrụ na Windows
Kedu ihe ị ga - eme mgbe OneNote kwuru na enwere nsogbu na ngalaba a?
Ọ bụrụ na ị na-ahụ njehie “Enwere nsogbu na ọdịnaya dị na ngalaba a, gbalịa ihe ndị a: Mepee akwụkwọ ndetu na ụdị desktọọpụ nke OneNote, nke na-enye nhọrọ mgbake ederede. Zipu okwu a kapịrị ọnụ ị na-enwe na nzukọ OneNote na Microsoft Answers.
Kedu ihe kpatara ngwa OneNote m anaghị arụ ọrụ na kọmputa m?
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị agaghị emekọrịta, ịnwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịtọgharị ngwa na ndabara OneNote njehie 0x803d0013: Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ koodu mmebi nke nwere ike ịpụta mgbe ị na-eji OneNote. Enwere ike ibute nsogbu a site na profaịlụ njirimara rụrụ arụ, ị nwere ike idozi ya site na ịmepụta profaịlụ njirimara ọhụrụ na Windows
Enwere akwụkwọ ndetu na OneNote nke na-adịghị adị?
Akwụkwọ ndetu adịghị. Enweghị ike itinye faịlụ ahụ. Aha ya abaghị uru. Mpempe akwụkwọ (ngalaba otu) adịghị. Ajụjụ a abaghị uru. Faịlụ ahụ adịlarị. Ezochiri ngalaba ahụ ma kpọchie ya. Iwu ahụ nwere nkwarụ site na iwu. OneNote emetụbeghị ọdịnaya. Akụkụ ahụ sitere na OneNote 2007 ma ọ bụ tupu.
chọta aha homegroup
Choo aha homegroup - nzaghachi nye nsogbu a
Gịnị bụ RAVBg64 EXE? Faịlụ RAVBg64.exe bụ ngwanrọ ngwanrọ nke Realtek HD Audio Driver ma ọ bụ Realtek High Definition Audio codecs. Ọ dị mgbe niile na folda '\_ Realtek \_ Audio \_ HDA' na 'C: \_ Mmemme Mmemme.' A tụkwasịrị ya obi na ịdenyere aha ya nke ọma, ya mere ekwesịghị ịkpata nsogbu ọ bụla. 2019
mfe adịghị arụ ọrụ
Simplepass anaghị arụ ọrụ - nzaghachi maka okwu a
Kedu ihe kpatara na Logitech m ekweisi anaghị arụ ọrụ? Kwupu isi na PC USB USB ma regharịa kọmputa. Emeghachila naanị - rụọ ọrụ mmechi zuru ezu wee wee laghachi, n'ihi na nke a ga - enyere aka kpochapụ ebe nchekwa ahụ na ọdụ ụgbọ USB. ... Gbaa mbọ hụ na ahọpụtara isi dị ka ngwaọrụ ndabara na PC n'okpuru nhọrọ Sound Recorder na nhọrọ ọkpụkpọ.
arụ ọrụ runtimebroker.exe
Runtimebroker.exe arụ ọrụ aborted - ajụjụ nkịtị
Gini mere Shockwave ji emebi? Ọ bụrụ na otu n’ime gị tinye-ons bụ nsogbu, ma ọ bụ n’ihi ihe ụfọdụ esemokwu na ihe nchọgharị gị na ma ọ bụ ndị ọzọ na tinye-ons, ọ nwere ike ime ka Shockwave Flash ka jiri nke. Iji hụ ma nke a bụ nsogbu gị, ịkwesịrị iwepu ihe mgbakwunye gị niile nwa oge, wee chọpụta ma edozi nsogbu ahụ.
(c) 2022 thespeedcube.com. Ikike Niile Echekwabara.